Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Airbus ayaa diyaaraddii ugu horreysay oo nooceedu yahay A220 gaarsiisay Air France
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
A220 waa ujeeddada kaliya ee diyaaradeed ee loo dhisay suuqa fadhiga 100-150 waxayna isu keentaa aerodynamics casri ah, qalab horumarsan iyo mashiinnada turbofan ee jiilka ugu dambeeyay ee Pratt & Whitney.
A220 waa diyaaradda ugu waxtarka iyo dabacsanaanta badan 100 ilaa 150 qeybta suuqa ee maanta.
Air France A220-300-kii ugu horreeyey ayaa lagu hawlgelin doonaa shabakadeeda dhexdhexaadka ah laga bilaabo xilliga jiilaalka ee 2021-ka.
A3,450 oo leh baaxad dhan 6,390 nm (220 km)
Air France waxay heshay A220-300-kii ugu horreeyay amar ka yimid 60 diyaaradood oo nuuceedu ahaa, amarka ugu weyn A220 oo ka yimid xamuul reer Yurub ah. Diyaaradda ayaa laga keenay khadka ugu dambeeya ee shirarka Airbus ee Mirabel, Quebec, Canada waxaana si rasmi ah loogu soo bandhigay dadweynaha xaflad lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Charles Charles-De-Gaulle.
Airbus A220 waa diyaaradda ugu waxtarka iyo dabacsanaanta badan 100 ilaa 150 qeybta suuqa ee maanta. Dib-u-cusboonaysiinta maraakiibta keli-keli ah ee Air France oo leh diyaaraddan jiilka ugu dambeeya ayaa kordhin doonta wax-ku-oolnimada oo ay weheliso raaxada macmiilka iyo taageeridda Air France si ay uga soo baxdo himilooyinkeeda bay’adeed iyo ujeeddooyinka joogtaynta.
Midkii kowaad wuxuu u Air France A220-300 waxaa lagu hawlgelin doonaa shabakadeeda dhexdhexaadka ah laga bilaabo xilliga jiilaalka 2021. Waqtigan xaadirka ah, Air France waxay ku shaqaysaa 136 diyaaradood Airbus diyaarad. Air France ayaa sidoo kale cusbooneysiineysa maraakiibteeda muddada dheer, waxayna horey u qaadatay gaarsiinta 11 A350s oo ka mid ah amarkii 38.
Qolka Air France A220-300 waxaa loo qaabeeyey qaab hal fasal ah si raaxo leh loogu soo dhaweeyo 148 rakaab ah. Iyaga oo bixinaya raaxo hal dhinac ah, oo leh kuraasta maqaar ee ugu ballaadhan, daaqadaha ugu waaweyn iyo ilaa 20% ka badan oo meel bannaan oo dulsaar ah rakaabkiiba, Air France A220 ayaa sidoo kale leh isku xirnaan WiFi oo dhan oo dhan qolka iyo laba saldhig oo USB ah oo kursi kasta oo rakaab ah.
A220 waa ujeeddada kaliya ee diyaaradeed ee loo dhisay suuqa fadhiga 100-150 waxayna isu keentaa aerodynamics casri ah, qalab horumarsan iyo mashiinnada turbofan ee jiilka ugu dambeeyay ee Pratt & Whitney. A3,450 oo leh baaxad dhan 6,390 nm (220 km) A220 wuxuu gaarsiiyaa 25% gubasho shidaal oo hooseysa iyo qiiqa CO2 halkii kursi marka la barbardhigo diyaaradaha jiilkii hore, iyo 50% hoos udhaca NOx marka loo eego heerarka warshadaha. Intaa waxaa dheer, raadadka buuqa diyaaradda waxaa hoos loo dhigay 50% marka la barbar dhigo diyaaradihii jiilkii hore - taasoo A220 ka dhigaysa deris wanaagsan agagaarka garoomada diyaaradaha.
Dhamaadkii Ogosto, in ka badan 170 A220s ayaa la gaarsiiyay 11 ka shaqeeya adduunka oo dhan.